कंगना फेरी सुशान्तको मृ’त्‍युको कारणको प्रमाण सहित मिडियामा, यस्तो छ कागजी प्रमाण ! (भिडियो सहित) – Jagaran Nepal
कंगना फेरी सुशान्तको मृ’त्‍युको कारणको प्रमाण सहित मिडियामा, यस्तो छ कागजी प्रमाण ! (भिडियो सहित)
सुशान्तका मामाले पनि सुशान्तले आ’त्मह’त्या गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘ उनले आ’त्मह’त्या गर्न सक्दैनन् । प्रहरीको यस घ’टनामा जाँच गर्नु पर्दछ । उनको मृ’त्युमा कुनै दा’उपे’च हुन सक्छ । उनकी ह’त्या भएको हो । ’ – एजेन्सी भिडियो